Golaha deegaanka Galkacyo oo xilka ka qaaday ku xigeenka Duqa magaalada Galkacyo Md. C/llahi Ibrahim Macruuf. – Radio Daljir
Galkacyo, Oct 23 ? Fadhi ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha golaha deegaanka ee magaalada Galkacyo ayaa ay kalsoonidii kala laabteen ku xigeen Duqa magaalada Galkacyo C/llaahi Ibraahim Axmed ?Macruuf?. Fadhiga mudanayaasha oo ay ka soo xaadireen 28 mudane ayaa 25 ka mid ahi ay u codeeyeen xil ka qaadida ku xigeenka duqa magaalada Galkacyo, halka 2 mudane ay ka aamuseen, midna uu diiday xasaanad ka qaadidda.
Guddoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Gallkacyo Md. Farxaan Cali Xirsi ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xil ka qaadidda guddoomiye ku xigeenkka; wuxuuna sheegay mudanayaashu in ay isku raaceen xil ka xayuubinta ku xigeenka, waxaana uu intaasi ku daray in la maray sifo sharciga waafaqsan.
Guddoomiyaha oo ay wariyaashu wax ka waydiiseen sababta dhalisay xil ka qaadidda ku xigeenka duqa ayaa sheegay in loo cuskaday dhawr qodob oo sharci ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin xil gudasho la?aan iyo dhawri-waa amaano.
Ku xigeenkii Duqa magaalada Galkacyo ee xilka laga qaaday Md. C/llaahi Ibraahim Axmed ?Macruuf? oo isna saxaafaddu waydiisay siduu u arko xil ka qaadista lagu sameeyey ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay xasaanadda laga xayuubshay, wuxuuna sheegay horayba in uusan u lahayn awood buuxda oo wax ku ool u ahayd, haatanna aysan wax badan iska baddali doonaan.
Dhawr mudane oo ka tirsan golaha deegaanka Galkacyo ayaa isla maantaba guddoomiyaha golaha u soo gudbiyey dalabkood murashaxnimo ee ay ugu tartamayaan jagada bannaan ee ku xigeenka duqa magaalada Galkacyo.
Waa markii ugu horraysay oo mas?uul ka tirsan maamulka degmada xilka laga xayuubiyo tan iyo markii la dhisay maamulka cusub ee magaalada Galkacyo bilawgii sanadkaan aynu ku guda jirno.